ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် – ၂
ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် – ၂
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 13, 2017 in Best Web Awards, Opinions & Discussion | 13 comments
ကာချုပ်ကို ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ချုပ်နဲ့ အရပ်သား ရုံးထုံးစံမှာ အဆင့်တူလို ရန်ကုန်ဝန်ချုပ်ကွီးဖြိုး ပြောတာကို တုံ့ပြန်တဲ့အထဲက အလုပ် သဘာဝခြင်းမတူလို့ ဖွဲ့စည်းပုံခြင်းလည်း မတူနိုင် (ဝါ) စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အရပ်သား ဌာနဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံထက် ပိုမြင့်သယောင် ပြောဆိုမှုကို ဆွေးနွေးချင်တယ်။ ကနဦးအနေနဲ့ အရပ်ဖက်နဲ့စစ်ဖက် သဘောသဘာဝခြင်း မတူတာ ငြင်းစရာမရှိ။ မတူလို့လဲ စစ်တပ်ကို ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မြို့ထဲအဝင်မခံ၊ စစ်တန်းလျားမှာသာ နေစေတယ်။ မြို့ထဲ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မဝင်ရ။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာတော့ အဲဒါတွေ အားလုံးပျက်ပဲ။ လက်နက်ကိုင်ခြင်း အတူတူ ရဲနဲ့စစ်တပ်တောင် အရပ်သားနဲ့ ရောထွေးဆက်ဆံ နီးစပ်မှုခွင့်ပြုထားခြင်း ကွဲပြားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ယူအက်စ်မြို့ကြီးတခုမှာ အဓိကရုဏ်းနဲ့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအတွက် သံချပ်ကာကား အသုံးပြုမယ်လုပ်တာ စစ်တပ်ဆန်လွန်းတယ်၊ မြို့ပြလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် မသင့်လျော်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြန်ရုပ်သိမ်းရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ စစ်တပ်မရှိ မဖြစ်သယောင် ဇွတ်အတင်း လုပ်ထားတာမို့ စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကပဲ အရပ်သားထက် ပိုမြင့်သယောင် မျက်စေ့လည်ကုန်တယ်။ မတူတာနှစ်ခု မနှိုင်းယှဉ်တာ အကောင်းဆုံးပါ သို့သော် လက်တွေ့မှာ စစ်သားကို မိုးကျရွှေကိုယ်တော်ဇာတ်သွင်းတဲ့အခါ သူတို့မူလ ရာထူးရဲ့ တဆင့်မြင့်၊ နှစ်ဆင့်မြင့်နဲ့ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးထဲဝင် ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်တာ မထူးဆန်းသယောင် ဖြစ်သွားပါရော။
စစ်တပ်သည် ထူးခြားလို့ သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ် အမြင်ကို ကြည့်ရအောင်၊ ဘာတွေထူးခြားသလဲ… (၁) လူအင်အား၊ ၃သိန်းရှိတယ် ပြောတယ် အဲဒါ ဖွဲ့စည်းပုံ အင်အားပါ။ တပ်ရင်းတခု အင်အားပြည့် ၇၇၇ ယောက် ဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်း သုံးရာ၊ လေးရာနဲ့ ဖွဲ့ထားတာ အများသိနေတဲ့ကိစ်စ။ ဒီနေ့လို ဗိုလ်တရာ တပ်သားငါးဆယ်နဲ့ ပွယောင်းယောင်း စစ်တပ် မပြောနဲ့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ဖွဲ့ထားတဲ့ မဆလခေတ် စစ်တပ်မှာတောင် တပ်ရင်းတရင်း အင်အားပြည့်ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်။ အင်အားပြည့်ပြမှ နှစ်စဉ် အသုံးစားရိတ် ဘတ်ဂျက်မှ တောင်းလို့ကောင်းမည်လေ။ စစ်တပ်ငွေစာရင်းကို အစိုးရစစ်ခွင့်မရှိတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်။ အင်အားများလို့ chain of commend အမိန့်ပေးစနစ် ရှည်တယ်ဆိုရင် သူ့လို အလားတူ အင်အားများတဲ့ အရပ်သား ဌာနတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲ တပ်ဖွဲ့ တခုခြင်းစီမှာ ဝန်ထမ်းအင်အား သိန်းချီပါမယ်။ သူတို့ကိုိလဲ စစ်တပ်လိုပဲ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်သင့်တယ်။ (၂) နိုင်ငံအတွက် အရေးပါတယ်။ စစ်တပ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံသာရှိတယ် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲ ဌာန မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ရယ်လို့ မရှိ။ ဘယ်သူ ပိုအရေးကြီးသလဲ.. ငါ့စကားနွားရ ကတ်ပြောကြေးဆိုလျင် ပြောတာပါ။ (၃) ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေ သုံးစွဲမှု။ ဒါလဲ အန်အယ်လ်ဒီ အစိုးရ ဘတ်ဂျက်မှာ ကာကွယ်ရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး ပြည်ထဲရေး အသုံးစားရိတ်များ ထိပ်ဆုံးကပါ။ (၄) စစ်သား ပင်ပန်းဆင်းရဲလို့ အသက်အန်ဒရယ် ရှိလို့တော့ လာမပြောနဲ့၊ တပ်ထဲဝင်ကထဲက ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်။ အရပ်ဖက်ထက်ပိုတဲ့ ခံစားခွင့် ရထားပြီးပြီ။ စစ်သား ပင်ပန်းဆင်းရဲသလို တောနယ်တွေသွား တာဝန်ထမ်းရသူ အရပ်ဖက်ဝန်ထမ်းများလဲ အဆင်မပြေကြပါဘူး။
ခုဖြစ်နေတာ တပ်ချုပ်ရာထူးကို ညွှန်ချုပ်လို့ပြောတာ နှိမ်တယ်ထင်တယ်၊ အကြောင်းခံက စစ်တပ်ရာထူးသတ်မှတ်ပုံက ရှည်တယ်၊ အရပ်ဖက် ဌာနဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပုံက တိုနေတယ်။ အရပ်ဖက်ဌာနအားလုံးကို ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရန် မဖြစ်နိုင်ဆိုလျင် စစ်တပ်နဲ့ အင်အား၊ အရေးပါမှု၊ အသုံးစားရိတ် တူညီတဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာရေး ရဲဌာနတွေကို ဒီလို ဖွဲ့စည်းပုံပြင်လိုက်။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွေကိုပေါင်း ပညာရေးဆိုလဲ ဦးစီးဌာနတွေပေါင်း ဒါဆို တဌာန အင်အားသိန်းချီပြီ။ ပြီးလျင် ညွှန်ချုပ်အထက် ဒုညွှန်ချုပ်မှုးကြီးနဲ့ ညွှန်ချုပ်မှုးကြီး နှစ်ဆင့်ထပ်တိုး… ဝန်ကြီးနဲ့ ဒုဝန်ကြီးကို သူတို့လက်အောက်မှာထား။ ကာချုပ်နဲ့ဒုကာချုပ်အောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နေရသလိုပေါ့။ ရဲလည်း ထိုနည်း၎င်း၊ ရဲချုပ်မှုးကြီးရာထူး ထပ်ထွင်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို သူ့လက်အောက်ထား။ အသစ်ထွင်တဲ့ ချုပ်မှုးကြီးတွေကို အရပ်သားထဲကခန့်။ ဒါဆိုရင် ၉၀% တပ်ကလာတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ချုပ်တွေကို ထိန်းပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။ တပ်ချုပ်ကြီးလည်း သိပ်ခါမကျတော့ဘူး။ သူ့အဆင့် ညွှန်ချုပ်ထက် မြင့်သွားပြီ။ ဟုတ်တယ်နော် သူလည်း သူစိတ်ကြိုက် ဖွဲ့စည်းပုံရှိလျင် ကိုယ်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဖွဲ့နိုင်ရမှာပေါ့။
မင့်ဟာ တမင်ခွတိုက်တာပဲ၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ရင် တမျိုးပြောင်း စဉ်းစားမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံမတူဘူး၊ အင်အားခြင်းကွာတယ် ဆင်နဲ့ဆိတ် ဖင်ပိတ်ငြင်းမယ် ဆိုပါစို့။ မြင်သာတဲ့ ဥပမာပေးမယ်။ ဗုဒ်ဓဘာသာမှာ ကဗာလုံးဆိုင်ရာဂိုဏ်းချုပ် မရှိဘူး။ နိုင်ငံအလိုက် သာသနာအကြီးအကဲပဲရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆို မဟနဥကဌ ဆရာတော်ကြီးပေါ့။ ကက်သလစ်မှာ တကဗာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဗာတီကန်သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရှိတယ်။ ပရိုတက်စတင့်မှာဆိုလဲ အင်္ဂလီကန်သာသနာပိုင်ရှိတယ်။ မွတ်ဆလင်မှာဆိုလဲ ရှီအာနဲ့ စွန်နီ ဂိုဏ်းလိုက်လို့ အီရန်နဲ့ဆော်ဒီမှာ ဆိုင်ရာ သာသနာပိုင်ရှိမယ်။ (သဘောကို နားထောင်၊ ဘာသာရေး ဆွေးနွေးတာမဟုတ်)။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ သူတို့ဂိုဏ်းချုပ်တွေသည် ဒေသဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အကြီးအကဲအဆင့်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည် ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်ကတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းထက် တဆင့်ပဲနိမ့်တဲ့ ကာဒီနယ်လ်ဘုန်းကြီးလို့ သိထားတယ်။ သူ့အယင် ဂိုဏ်းချုပ်သည် ဘိရှော့ပ်အဆင့်ထင်တယ်။ ပြောချင်တာ မြန်မာပြည်ထက် ခရစ်ယာန်၊ မူဆလင် သာသနာများသည် လူအင်အား၊ ငွေကြေး ပိုင်ဆိုင်မှု ပိုများလို့ ပုခုံးခြင်းယှဉ်လို့ မရဆို တရားပါမလား။ သာသနာဆိုတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ တိုင်းတာမှသာ မဟနဥကဌသည်၎င်း အခြားဗုဒ်ဓဘာသာနိုင်ငံ သာသနာပိုင်များသည်၎င်း အခြားဘာသာ သာသနာပိုင်များနဲ့ တန်းတူရည်တူ ရှိပါမယ်။ အဆင့်မတူလို့ နာတယ်ထင်ရင် သာသနာပိုင်း အခြင်းခြင်း မတွေ့နဲ့၊ စစ်ဝန်ထမ်းလည်း အရပ်ဖက်ဝန်ထမ်းထဲ ဝင်မရှုပ်နဲ့၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေ။
အလားတူစွာ စစ်တပ်အကြီးအကဲနဲ့ အရပ်ဖက်ဝန်ထမ်း အကြီးအကဲသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတာခြင်း တူတယ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ ကွီးဖြိုး ပြောတဲ့ စစ်ဖက် အရပ်ဖက် ဆက်ဆံရေး ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ မရှိသည် အမှန်ပဲ။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်စဉ် စစ်အစိုးရလက်ထက် ဟုတ်လိမ့်မယ်။ အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးမှာ အဲဒီ ဆက်ဆံရေးကို ဆက်ရမှာ မဟုတ်၊ ဖျက်ရမှာ။ ငါတို့ အလယ်အလတ် အဆင့်က မင်းတို့ ထိပ်ဆုံးအဆင့်နဲ့ တူတယ်လုပ်ထားတဲ့ စစ်တပ် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှုကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရမှာ။ အဲလိုမှမဟုတ် စစ်တပ်သည် ပိုထူးခြားတယ် ပိုမြင့်တယ် ထင်လျင် ဒီမိုကရေစီ ဘယ်လောက် လိုချင်တယ်ပြောပြော၊ အမေစုကိုချစ်တယ် ဘယ်လောက်အော်အော် လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင် အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးစစ်စစ် ဘယ်တော့မှ မရနိုင်ဘူး။ ဘီလူးစည်း လူ့စည်း နားလည်လျင်၊ သူ့တန်ဖိုး ကိုယ့်တန်ဖိုး သိလျင် ပြီးပါတယ်။ မပြည့်တဲ့ရေအိုးသာ ဘောင်ဘင်ခတ်တာ။ ဆိုရိုးစကားရှိသလို ကြီးသူအားထား၊ ငယ်သူသနား၊ တန်းတူလေးစား စိတ်ထားနိုင်ဖို့ (အထူးသဖြင့် စစ်တပ်) လိုအပ်ပါကြောင်း….။
ကွီးဖြိုး ကွီးဖြိုး ဒုံး ဒုံး……
အောင်ကြူးhas written 643 post in this Website..
ဦးကြောင် ဦးကြောင် ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း
ဒီစမ်းသပ်ချက်မှာတော့ ဘယ်လိုတွေတောင် စန်းစန်းတင့်ပြီး ကြွေပန်းကန်ဖြစ်ကြသလဲဆိုတာ သိသွားတယ်
ဒီကိတ်စက မှန်တာမှားတာထက်။ ပြောသင့်မသင့်က ပိုအရေးကြီးတယ်။ ပြောရင်တော့ ခံသာသော ပြောတဲ့နည်းနဲ့ပြောရမယ်။ ကိုယ်က အိမ်ပေါ်ကနေ နှင်ချရမယ် ကိတ်စကို ဘီလူးဆိုင်းသုံးပီးနှင်ချရအောင် ကိုယ်ဘက်က အင်အားဘယ်လောက် ရှိနေပီလဲ။ ဒါကိုလည်း သတိချပ်ဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ်က အပေါ်ဖဲမဟုတ်ပဲ ရှိုးချင်တာတော့ နဲနဲ လိုသလားလို့ ။ မှန်တယ်လို့လှိမ့်အော်နေလို့ ကော ဘာထူးသွားမလဲ။ ဟုတ်မှန် အကျိုးမရှိစာတာ ပြောသင့်ထဲပါသလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါလေ။
ကိုယ်ကပဲ ကွီးဖြိုးကို အကောင်းမြင်လွန်းနေသလား မသိ..
ဒီစကားကို ပြောသင့်မပြောသင့် မသိဘဲ ပြောတယ်လို့ကို မထင်တာ.. ပြောရမယ့်အကြောင်းရှိလို့ကို ပြောတာ..
လေဖြိုးလို့ ဘဲ သတ်မှတ်ထားတယ် .. မထသ ကို အားမရှိသေးဘဲ ထကိုင်လိုက်တာ ရန်ကုန်နေ ဘတ်စကားစီးသူ တစ်သန်းကျော် ဒါဏ်ခံ လိုက်ရတယ် …
အခု မအလ ကို ဘာအားမှ မရှိသေးဘဲ သွားထိလိုက်တာ မြန်မာပြည်သူ သန်း ၅၀ ထိသွားနိုင်တယ် …ထိသွားနိုင်တယ်ဘဲ ပြောတာနော် သူဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ မသိသေးဘူး …
အချို့ စီးပွားရေးသမား တွေ တွန့်သွားတယ် .လုပ်ငန်းဆက်လုပ်သင့် မသင့် ခဏနေပါဦး ဖြစ်သွားတယ် ။။အားပြိုင်ကြပြီ စောင့် ကြည့်မှ ဖြစ်ကုန်ကြတယ် …အဲ့ဒါလက်တွေ့ ဖြစ်စဉ် ။
အပေါ်ယံ စကားလေး တစ်လုံးဆိုပေမဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်က အတိုက်အခံ စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားဖို့ကောင်းတယ်
ဇာဂနာ ပြက်ခဲ့တဲ့ မှန်တိုင်းလဲ မကောင်းဆိုတာ အခုထိ မှန်တုန်း ။
မကျော် နိုင်သေးခင်မှာ အားမွေးကြရဦးမှာ ။။။။။။။။။
လုပ်ချိန်မတန်ဘဲလုပ် … ပြောချိန်မတန်ဘဲ ပြောသူ လေဖြိုးလို့ဘဲ မြင်တယ်… ။။
ရန်ကုန်နေ ဘတ်စကားစီးသူ တစ်သန်းကျော်
အဲဒါတော့ မဟုတ်ပါဘူး အူးလေးရာ.. အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ အပြောင်းအလဲမှာ. အဆင်ပြေကြတဲ့အသံတွေ အများကြီး ကြားရပါတယ်.. တစ်သန်းကျော်လုံးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ဘယ်သူတွေ အော်နေကြလဲမှ မသိတာ..
ပထမ- ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်ရဲ့ သရော်စာ
ဒုတိယ- ၀ကခရဲ့ ညွှန်ချုပ်ဥပမာ
အဲဒီ ၂ ခုလုံးအတွက် တပ်မတော်ရဲ့ တုန့်ပြန်ပုံကို သဘောမကျဘူး…
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင်ထူထောင်ရေး (နှစ်၂၀- နှစ်၅၀) လမ်းကြောင်းမှာ
အခု တပ်ကို လျှောက်ဆဲနေတဲ့ ချာတိတ်ကလေးများဟာ နောင်မှာ
တိုင်းပြည်ကို ဒီမိုပန်းတိုင်ဆီ ဦးဆောင်ဆွဲခေါ်သွားရမှာဖြစ်တယ်
သူတို့ စောစော သဘောပေါက်လေ ဒီမိုလမ်းကြောင်းဖြောင့်လေ ဖြစ်မယ်
သူတို့သေတဲ့အထိ ဒီမိုမရသေးမှာ သေချာတယ်..
လူငယ်တွေ မပိန်းကြပါစေနဲ့ …..
လိမ္မော်သီးနဲ့.. ပန်းသီးကို.. တူပါတယ်ဆိုပြီး.. အတင်းကြီးဆွဲညှိနေတယ်..။
ဟုတ်လဲမဟုတ်.. မှန်လည်းမမှန်.. အကျိုးလည်းမရှိ..။
အကျိုးမရှိ.. ဆိုရာမှာ.. ဒီချုပ်ရော တပ်ကော.. ၂ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးမရှိ..။
၂ဖက်လုံးအကျိုးယုတ်တဲ့အပြင်.. ကြားထဲက.. လူထု သန်း၅၀ကျော်အတွက်လည်း အကျိုးယုတ်မှာသေချာ..။
တချက်ထဲနဲ့ ၂ဖက်လုံးကို”ချ”ချင်တဲ့အုပ်စုအတွက်တော့.. ချွန်တွန်းလုပ်လိုက်ရင်.. အကျိုးရှိမယ်ထင်ချင်ထင်မှာပဲ..။
၂အုပ်စုကိုေ-ာက်မြင်ကပ်တာလေးနဲ့တော့.. မလုပ်သင့်ဟု ထင်ပါကြောင်း..။
ပြီးတော့ သူ့အထက်မှာနေမဲ့ ဒုသမတ
ပြီးတော့ သူ့နေရာကိုဆက်ခံဘို့ ကာချုပ်အသစ်ကိုလည်း
သူဘဲခန့်တယ် ( ခုချိန်ထိတော့ သက်တမ်းပြည့်သွားလို့
ဘယ်သူ့ကိုမှမခန့်ဘဲ သူ့ကိုယ်သူပြန်ခန့်ထားသေးတယ် )
ဒါတင်မကဘူး…. ပြည်ထဲရေး ၊နယ်စပ်ရေးရာ ဆိုတဲ့
ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်အင်အားရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံကိုလည်း
သူဘဲ ပိုင်တယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲလောက် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိတာ
သူကလွဲပြီး တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ။
အဲဒီနိုင်ငံမျိုး ကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ပြောလာရင် ပြောတဲ့လူ
Credit …Zaw Bala via ဥာဏ်လှိုင်(ခ)ရန်ငြိမ်းသူ
၂၀၀၈ ခြေဥစာအုပ်ကြီး ငုတ်တုတ်နဲ့.. အဲလိုတွေလျှောက်ပြောနေရင်.. ဖတ်သူတွေအူကြောင်ကြောင်တွေဖြစ်ကုန်တော့မပေါ့..။
၂၀၀၈ ခြေဥ ပုဒ်မ ၃၄၂ အရ… ကာချုပ်ကို ကာလုံရဲ့ အဆိုပြုထောက်ခံချက်ဖြင့် သမ္မတက ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီအတိုင်းပဲ.. ပုဒ်မ ၂၃၂ အရ.. အစိုးရ ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများထဲက.. ကာကွယ်ရေး၊ နယ်စပ်ရေးရာ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ အမည်စာရင်းကို ကာချုပ်ဆီက ယူရမယ်..။ ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တင်သွင်းပြီး သဘောတူညီချက်ရယူ.. သမ္မတက.. ၀န်ကြီးတွေကို ခန့်ထားနိုင်ပါတယ်..တဲ့.။ သမ္မတက.. ခန့်တာ..။ ကာချုပ်က ခန့်တာမဟုတ်..။
ပြောရရင်.. ၂၀၀၈ ခြေဥက သမ္မတကို အလွန်အကျွံပါဝါအာဏာပေးထားတာပါ..။
သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ပေါ့..။ ဆက်ပြောရင်.. တပ်ချုပ်ကြီးခမြာ.. ပက်လက်ပါလန်နေမှာစိုးသမို့.. ဒီလောက်ပဲ..။
FM ကြော်ငြာတွေလိုပဲ …. အခုပဲ ခြေဥကို ပြေးသွားဖတ်လိုက်ကျပါဇို့ ☺️
အင်း အရမ်းပဲမြင့်လွန်းနေလို့လားမပြောတတ်ဘူး။ ဖတ်ပြီးသကာလ ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ မရေးပဲ ပြန်သွားပါကြောင်း… ဒုန်း ဒုန်း
ရွေရည်စိမ်ဒီမိုးခရေဇီ တိုင်းပြည်ကြီးပဲ ဖြစ်နေသေးကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားသဟဲ့။
ဦးကြောင်ကြီး on Along with Gods, Two World
ဦးကြောင်ကြီး on အိမ် – Home
ဦးကြောင်ကြီး on ဗိုလ်ချုပ်ပိုက်ဆံ
ဦးကြောင်ကြီး on ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXVII
ဦးကြောင်ကြီး on စောင်ငှက်လက်ထက် ဒီမိုပျက် ရှစ်လေးလုံးအခက်
kai on အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း Bold News – June 2018 ဇွန် ၂၀၁၈
Shar Thet Man on “မင်းတိုင်းကျေ”
Shar Thet Man on စောင်ငှက်လက်ထက် ဒီမိုပျက် ရှစ်လေးလုံးအခက်
Shar Thet Man on လွမ်းလို့လာ
ဦး လေး မန်း on မင်းနာမည်နဲ့ ငါ့ကိုခေါ်ပါ ( ၀၁ )
ဦး လေး မန်း on Alibaba
ဦး လေး မန်း on မန္တလေး ဓါတ်ပုံလှလှရိုက်ကြမယ်
ဦး လေး မန်း on ******တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု********
ဦး လေး မန်း on လွမ်းလို့လာ
Thint Aye Yeik on စောင်ငှက်လက်ထက် ဒီမိုပျက် ရှစ်လေးလုံးအခက်
မောင်ရိုး on ကျွန်တော်တို့၏ မန်းဂဇတ်ရွာကလေး အတွက် လိုအပ်နေသော အရာတစ်ခုအား အကြံပြုတင်ပြခြင်း
ဦး လေး မန်း on “မန်းဂေဇက် အလွမ်း”
ဦး လေး မန်း on အိမ် – Home
ဦး လေး မန်း on အညွန့်ခူးစားခံရခြင်း
kyeemite (93218 Kyats )
Shar Thet Man (61898 Kyats )
monmon (61045 Kyats )
Foreign Resident (59875 Kyats )